"La Petite Maison" enombono wolwandle - I-Airbnb
"La Petite Maison" enombono wolwandle
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguVirginie
"La Petite Maison" isembindini wezibuko elincinane lokuloba laseBrigneau.
Le ndlu yayidla ngokwamkela abasebenzi ababeze kusebenza kumzi-mveliso omeleneyo ukuze babethe iintlanzana.
Igcwele umtsalane, yindawo efanelekileyo yokwenza i-cocooning.
Indlela engaselunxwemeni idlula phambi kwendlu kwaye ikuthatha uhambe kwindlela yesithethe.
IConcarneau kunye nesixeko sayo esibiyelwe ngodonga, iPont Aven kunye neegalari zayo okanye iilwandle ezinophawu zonke zikufutshane.
Yindlu epholileyo nenomtsalane enemibala efudumeleyo.
Igumbi lokulala eliphindwe kabini linika umbono wezibuko kunye ne-mezzanine ivumela iibhedi ezi-3.
Igumbi lokuhlambela liyi-atypical kwaye lincinci, likhumbuza i-cabin yesikhephe.
Ikhitshi inazo zonke izixhobo eziyimfuneko zokupheka (ifriji, i-microwave, isitovu, i-oven, ...).
Eli zibuko lokwenyani, kufutshane nolwandle. Ngaphambili, iBrigneau yayiyizibuko lokuloba njengoko kungqinwa ziindonga ze-cannery endala yaseMalachappe ekungeneni kwechweba.
Namhlanje ubukhulu becala iye yaba yimarina, apho izikhephe ezineenjini kunye nezikhephe ezihamba ngeseyile zihamba usuku elwandle.
Ukusuka kwii-quay, ungalandela ngokukodwa i-GR34 (impawu ezibomvu nezimhlophe) kwaye ufikelele kumabhodlo e-cannery ekunika i-panorama emangalisayo yolwandle kunye nonxweme lwasendle. indlela iqhubeka ecaleni konxweme ukuya kumanxweme aseTrénez naseKerfany.
Idolophu yaseMoelan sur mer yimizuzu emi-5 ngemoto. Uya kufumana iivenkile ezininzi, iivenkile zokutyela, imarike, icinema, ivenkile enkulu.
Iilwandle zaseTrenez kunye neKerfany zifikeleleka ngemoto.
Eyona nto siyithandayo yi-Kerou beach (15mn) kwidolophu yaseClohars Carnoet. Kusekwe iklabhu yokusefa apho.
4.84 · Izimvo eziyi-79
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi79
Eli zibuko lokwenyani, kufutshane nolwandle, likunika umahluko omangalisayo wemibala. Ngaphambili, iBrigneau yayiyizibuko lokuloba njengoko kungqinwa ziindonga ze-cannery endala yaseMalachappe ekungeneni kwechweba.
Iilwandle zaseTrenez kunye neKerfany zifikeleleka ngemoto ngemizuzu embalwa okanye kwindlela yonxweme emva kokuhamba kakuhle.
Umbuki zindwendwe ngu- Virginie
Ukuhlala kwakho kwenzeka ngokuzimeleyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Moëlan-sur-Mer